Mahita Ny Dian-tànan’i Shina Amin’ireo Korontana Rehetra Ao Amin’ny Sampampahefàna Miady amin’ny Kolikolin’i Hong Kong Ireo Mpitsikera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Aogositra 2016 16:51 GMT
biraon'ny ICAC. Sary avy tamin'ny Apple Daily. Tsy natao hamidy.
Toa ho rava ny Kaomisiôna tsy Miankina Miady Amin'ny Kolikoly (ICAC), iray amin'ireo ivontoerana azo itokisana indrindra eo imason'ireo vahoakan'i Hong Kong — ary maro no miampanga an'i Shina.
Ny 7 Jolay, nesorina tamin'ny toerany tsy misy fanazavana ny lehiben'ny departemanta mpanatanteraky ny ICAC sy ny lefitry ny kaomisera, Rebecca Li Bo-lan. Nilaza ny kaomisera Peh Yun-luhe fa izy irery ihany no olona tokana afaka manapaka hevitra ny hanàla azy, fa noraisina tamin'ny tsy fahatokisana ny filazàny. Tendren'ny kabinetran'i Shina ireo kaomisera, miaraka amin'ny fanampian'ny lehiben'ny mpanatanteraka ao Hong Kong, ary miely ny resaka fa nahazo toromarika, na avy tamin'ny Lehiben'ny Mpanatanteraka CY Leung, na Beijing, i Peh mba hanajanona ny fanadihadiana atao amin'i Leung.
Mipetraka ambony seza mahamay i Leung noho ny nanekeny vola mitentina $50 tapitrisa dolara HK avy tamin'ny orinasa Aostraliana UGL mpanao asa vaventy, kanefa tsy nilaza ilay vola tamin'ny kabinetran'i Hong Kong, antsoina hoe Filankevitra Mpanatanteraka, na dia natao ny taona 2012 sy 2013 aza ireo fandoavana ny vola — taorian'ny nanendrena azy teo amin'ny toerana ambony indrindran'ny governemantan'i Hong Kong.
Ny taona 1974, naorin'ny governemanta Britanika mpanjanaka mba hanadio ny kolikoly any anatin'ny asam-bahoaka tao an-tanàna, manana ny lazany eny amin'ny vahoaka ny ICAC noho ny maha-azo antoka azy, izay nahatonga ilay korontana vao haingana ho tena nahagaga tokoa.
Nahatohina ny ekipa mpanatanteraky ny ICAC sisa tavela ny fandroahana an'i Rebecca Li, izay nanjohy ilay kaomisiôna tamin'ny 1984 ary nakarina ho kaomisera lefitra ny volana Jolay 2015. Andro vitsy taty aoriana, nametra-pialàna i Dale Ko, ny lehiben'ny mpanadihady.
Mbola loza noho izany, ny 28 Jolay, nanambara ihany koa ny Lehiben'ny Mpitàna Bokim-bola araka ny lalàna, Tang Shuk-nei, fa hiala amin'ny kaomisiôna ihany koa izy ny volana Aogositra. Notaterin'ireo loharanom-baovao fa nifampitàna tamin'i Peh izy nikasika ny fanalàna tampoka an'i Li.
Ny andron'iny ihany, nametra-pialàna tampoka ihany koa ny mpisolo toerana an'i Li, Ricky Yau Shu-chun, izay teo amin'ny toerany vao roa herinandro monja. Fa nisintona ny fametrahahany fialàna izy ora telo taty aoriana. Nilaza ireo loharanom-baovao tao amin'ny kaomisiôna fa natao taorian'ny fihaonany niaraka tamin'i Peh ilay fametrahany fialàna, ary nataony taorian’ ireo andiana fihaonana feno kirizinà “fihetsehampo” niaraka tamin'ny mpikambana tao amin'ny departemantan'ny mpanatanteraka, ilay fisintonany ny fametrahany fialàna.
Nandritra izany, nangataka an'i Peh hanome fanazavana ireo korontana sy fametraham-pialàna, ireo vondrona ara-politika. Nandritra izany, nangataka an'i Peh hanome fanazavana ireo korontana sy fametraham-pialàna, ireo vondrona ara-politika.
‘Iza no tomponandraikitra eto? I Shina io.’
Nino ny mpaneho hevitra ara-politika an-tsoratra, mitondra ny anarana hoe Big Lychee, ao amin'ny vohikalam-baovao The Nanfang, fa i Beijing no tomponandraikitra mivantana amin'io korontana io:
Amin'ny kisarisary ankapobeny, ny tena olana dia ilay fifanoherana eo amin'ny fahaleovantenan'ny ICAC sy ny filàn'ny Antoko Kaominista Shinoa hanana fanarahamaso sy fitantanana amin'ny zavatra rehetra. Tsy afaka matory ny alina ireo tomponandraiki-panjakan'i Beijing miaraka amin'ny fahafantarana fa afaka miala amin'ny fahefan'ny fanjakana ny masoivoho iray mpampihatra lalàna ao Hong Kong izay manana ekipa nofanin'ireo Britanika (ary misy Britanika aza ny sasany ankehitriny). Izao ny fotokevitra: raha manendry tomponandraiki-panjakana ambony ao Hong Kong i Beinjing, tsy misy rafitra hafa ananany ho afaka hanakatsakana na hanenjika ilay lehilahy. Iza no tomponandraikitra eto? I Shina io. Tokony hasiana fanamboarana izany.
Mazava ho azy, io no làlana mankany amin'ireo vokatra tsy ampoizina. Hitsahatra tsy ho tsy momba ny atsy sy aroa intsony ary hanary ny fahatokisana azy ny ICAC eo ambany tosik'i Beijing.
Faritra manana rafi-pitantanana manokana any Shina i Hong Kong, ary noheverina ho manana fizakantena ambony avy amin'ny tanibe, eo ambany fotokevitra “firenena iray, rafitra roa”. Na teo aza anefa io fifanarahana io, niatrika fiampangana i Beijing tato anatin'ireo taona faramparany hoe manamafy ny vahohony amin'i Hong Kong.
Betsaka tokoa ireo ezaka tao anaty fandaharam-potoanan'i Beijing natao hanafoanana ny kolikoly nanomboka ny taona 2012, saingy tsy avy amin'ny fo anefa izy ireny matetika. Mety ho fitaovam-piadiana ara-politika entina hamotehana ny mpanohitra fotsiny ny hetsika miady amin'ny kolikoly; raha ampiasain'ny governemanta toy izany ny ICAC, ho ratsiratsy ihany ny hoavin'ny hetsika mpomba ny demokrasia any Hong Kong ary ireo antoko hafa izay tsy mifanaraka amin'ny Antoko Kaominista Shinoa.
Naneho ny ahiahiny amin'izao toe-javatra miseho ankehitriny izao ireo mpisera amin'ny Aterineto tao anatin'ireo fanehoankevitra tao amin'ny famakafakàna YouTube:
hahatonga an'i HK ho firenena an-dalam-pandrosoana ny ICAC misaratsaraka, herin'ny mpitandro ny filaminana tsy tongasoa, governemanta voafatotra, Filoha Tale Jeneraly alikamaty, sns.
ICAC no ratsy indrindra. Tokony haato amin'ny asany eo noho eo i [CY Leung] mandra-piandry ny fanadihadiana. Raha tena tsara toetra izy (na fantany aza hoe meloka toy ny afobe izy) mba namoaka fanambaràna avy tao amin'ny Biraony izy, nilaza hoe “azoko tsara fa manadihady an'ireo zavatra nataoko fahiny ny ICAC atokisantsika. Hifanome tànana tsara amin'ny fanadihadiana aho”. Manamarika azy ho toy ny biby bitika milalao anaty rano mandrevo ny tsy fanaovany izany. Tokony tsy maintsy atao ny hitalahoana ireo tomponandraikitra ambony tao amin'ny ICAC nametra-pialàna ireo mba hiverina amin'ny toerany. Tomponandraiki-panjakana efa lehibe izy ireo ary raha ny tokony ho izy, tsy hanana taona maro be hiasana intsony. Lehibe tsy takatra ny lanjan'ny fahalalan'izy ireo. Tsy tambo isaina ny vokadratsin'ny fialàn'izy ireo, hahatonga ny ICAC ho tsy hanana ny maha-mpitarika azy intsony. Nosimbàn'ny CY ilay idealy izay nitiavan'ireo tanora hidirana ho ao amin'ny ICAC.
Nanipika ihany koa ny mpaneho hevitra ara-politika, Big Lychee, fa mitovitovy amin'ny lojikan'ilay fanambaràna tsy fivadihana amin'ny fifidianana, ilay fanendrena ireo olona hitantana ireo asa-panjakana fototra — fanambaràna tsy fivadihana izay lalàna vaovaon'ny fifidianana, vao nampidirina, mitaky amin'ireo kandidà ho solombavambahoaka, antsoina hoe Filankevitry ny Solombavambahoaka, hanao sonia fanambaràna izay milaza ny tsy fivadihany amin'i Shina. Hatreto, kandidà telo no nobahanana tsy afaka hiditra amin'ny fifidianana solombavambahoaka. Iray amin'izy ireo i Leung Tin-kei, nandray anjara tamin'ny fifidianana solombavambahoaka mpisolo toerana ny volana Janoary 2016.
Ambonin'ny Zavatra Rehetra Ny Tsy fivadihana
Tsy ny ICAC no sampana voalohany nizaka ny vokany tamin'ny fangatahan'i Beijing ny tsy fivadihana. Nisy fikorontanana mitovy amin'izany ihany koa hita tao amin'ny Haino Aman-jeri-panjakana mpanely vaovao ao an-tanànan'i Hong Kong.
Ny taona 2011, notendren'i Donald Tsang, Lehiben'ny Mpanatanteraka teo aloha i Roy Tang Yun-kwong, mpiasam-panjakana tsy manana traikefa amin'ny fanelezam-baovao na amin'ny media, ho talen'ny fampitam-baovao. Tao anatin'ireo efatra taona nanaraka, notsikeràna i Tang hoe nampiditra politika tamin'ny matoan-dahatsoratra sy raharaha manokan'ilay mpandefa vaovao. Ny taona lasa, nanolo an'i Tang amin'ny maha-talen'ny fampitam-baovao azy ilay mpanao gazety ela nihetezana Leung Ka-wing, lehiben'ny mpamoaka vaovao teo aloha tao amin'ny Asia Television mpomba an'i Beijing.
Tao anelanelan'ny savorovoro ao amin'ny ICAC, maherin'ny 100 ireo mpiasan'ny Radio Television Hong Kong, nilahatra teo ivelan'ny tranobe famoaham-baovao, nandritra ny fety fanomezam-pankasitrahana ny mpitantana, ny 18 Jolay, mba hanohitra ny fanemorana ny fampiakarana sokajy ilay mpanampy ny tale ankehitriny, Kirindi Chan Man-kuen. Nanazava ny mpitondra tenin'ny sendikàn'ny Radio Television Hong Kong, Amy Wong, fa in-droa tao anatin'ny 14 volana i Chan, izay niasa ho an'ilay haino aman-jery efa ho 30 taona eo, no tsy nahomby nanoloana ny fisafidianan'ireo mpitsaran'ny haino aman-jery, . Manahy izy fa io fanemorana io dia noho ny ” toetran'i Chan tsy azo ifampiraharaha amin'ireo olana ara-politika nafanafàna” mialoha ireo fifidianana Filankevitry ny Solombavambahoaka sy lehiben'ny mpanatanteraka.
Amin'ny teny hafa, mitovy amin'i Rebecca Li, raraka tamin'ny “fitsapàna ny tsy fivadihana” i Chan.
Ao amin'ny taniben'i Shina, takian'ny Antoko Kaominista Shinoa (CCP) ireo media rehetra hanamarina ny tsy fivadihany sy hanaraka ny rindran-damin'ny antoko. Satria tsy misy ara-dalàna ao Hong Kong ilay antoko, miseho amin'ny fanendrena ireo mpiasa ny tsy fivadihana, izay mitranga any ambadik'ireo varavarana mikatona tsy misy fijerena ny hevi-bahoaka.
Miahiahy amin'ny dikan'ireo fivoarana rehetra ireo amin'ny hoavin'ny tanàna ilay mpampiasa Twitter @renrenping. Nanoratra izao amin'ny eso izy:
Omena solonanarana CCP ny governemanta, omena solonanarana CCP ny polisy, omena solonanarana CCP ny fitsaràna, omena solonanarana CCP ny ICAC. Ireo mpanao lalàna mpomba ny demokrasia vitsy sisa tavela. Mitazona io ny vahoakan'i Hong Kong ary jereo tsara raha tsy omena solonanarana CCP ihany koa ireo sasany aorian'ny Septambra [fifidianana ny Filankevitry ny Solombavambahoaka].